Fifindrana valanaretina :: Nidina sivy ambin’ny folo ny tranga vaovaon’ny « Covid-19 » • AoRaha
Mba maivamaivana tsy toa an’ireo tarehimarika tao anatin’ny andro maromaro nifanesy ny isan’ny marary vaovao nahatiliana ny tsimok’aretina « Covid-19 » teto amintsika, omaly. Sivy ambin’ny folo ireo tranga vaovao. Marary iraika ambin’ny folo kosa no sitrana ary nijanona ho enina ihany ireo matin’ny valanaretina. Nitombo iray kosa ireo marary mafy. Sivy, hatramin’ny omaly, izay samy any Toamasina avokoa no olona mitondra ny Covid-19 arahi-maso akaiky any amin’ny hopitaly.
Mavesatra hatrany aloha ny fahavoazana any Toamasina. Manaraka ireo fenitra amin’ny fitsaboana rehetra amin’ity valanaretina ity ireo mpitsabo any an-toerana. Misy kosa olana atrehan’ireo mpiasan’ny fahasalamana ao amin’ny hopitaly Morafeno noho ny tsy fisian’ny fanafody hafa ilain’ireo marary. Tsy fanafody ho an’ny « Covid19 » izy fa tena ilaina kosa amin’ny fameloman’aina an’ireo marary mafy, ka voatery mitady any ivelan’ny hopitaly ny havan’ireo tsy salama.
Nohazavan’io loharanom-baovao io hatrany ny fampiasana ôksizena amin’ ireo marary mafy rehetra ireo. « Tsy tokony hisy olana ireo marary ireo fa miankina amin’ny vokatry ny fitsaboana ihany satria feno ny fenitra sy ny paik’ady hitsaboana azy ireo. Misy ny fitaovana sy ny mpiasan’ny fahasalamana mikarakara azy ireo », hoy izy.
Toamasina Momba an’ireo tranga vaovao indray, araka notaterin’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, omaly, dia dimy no marary vaovao tany Toamasina. Dimy ihany koa tany Fenoarivo Atsinanana; roa tao Moramanga; roa teto Antananarivo ary iray avy tany Amparafaravola sy Andilamena, raha tsy fantatra ny toerana nonenan’ireo telo ambiny.
Tafakatra dimy amby efapolo sy valonjato ny fitambaran’ireo olona voan’ny valanaretina teto Madagasikara, izay voatily tao anatin’ireo fitiliana « PCR » miisa efatra amby dimampolo sy sivinjato sy arivo sy iray alina, nanomboka ny 19 marsa hatramin’ny omaly.
Ho an’ireo marary iraika ambin’ny folo sitrana dia tao amin’ny hopitaly Morafeno tany Toamasina avokoa ny folo tamin’izy ireo. Iray kosa nanaraka fitsaboana tetsy amin’ny hopitaly Andohantapenaka. Mahatratra efatra amby dimampolo sy eninjato ireo tsaboina any amin’ny hopitaly samihafa, amin’izao fotoana izao.
Sekoly Sainte-Famille :: Naato noho ny fangatahan’ny mpianatra ny fampianarana